China RCL-4502 LED-Linear hazavana LED-Linear an-jiro sy mpanamboatra | lafo vidy
1.Jiro LED avo lenta avo lenta. Ny vatan'ny jiro aliminioma dia manana hafanana mahery
2.conductivity ary tsy miova, manatsara ny fiainan'ny vakana jiro LED
3. Hisintona mamaky ny groove. miaraka amin'ny lampshade: ampiasaina amin'ny faran'ny alohan'ny 18mm mirona
4. mpilalao ny kabinetra kiraro, ny halaliny dia -22mm araka ny halalin'ny halaliny.
5.It dia ampiasaina amin'ny fitoeran-kiraro RCS-4501 ho an'ny fampiasana avo lenta.
Hazavana mafana 6.3000K.
Hazavana voajanahary 7.4200k.
Jiro mangatsiaka 8.6000k.
Ahoana ny fomba hisafidianana fantsona LED?
Endrika - endrika U sy endrika V no endrika roa malaza indrindra. U-endrika dia tsara ho an'ny fametrahana avo indrindra raha ny endrika V kosa dia tsara ho an'ny fampiharana zorony.
Size - Ataovy azo antoka fa ny habaka anatiny dia ampy ho an'ny jiro LED. Ny serie universal universata LU1 misy mombamomba 17x8mm dia ampiasaina matetika, raha toa kosa ka ilaina manokana ny andiam-pivoarana muzata LU2. Momba ny lengh, manome fantsona aluminium misy metatra 1 sy 2 metatra izahay.
Loko - Manana karazana loko mitambatra izahay. Afaka misafidy ny tianao ianao na mifanaraka amin'ny lokon'ny tontolo iainana sy ny tanjonao.
Famirapiratana avo - Ho an'ny jiro, azonao atao ny misafidy fonosana kristaly. Raha te handroso lavitra ianao dia mety hahatratra ny filanao ny andalana roa misy andalana, izy ireo dia natao hametrahana fantsona LED roa hahazoana famirapiratana bebe kokoa.
Ny fiainana lava sy azo itokisana-ity hazavana mivantana LED ity dia azo ampiasaina mandritra ny 3 taona. Raha mila fanampiana ianao dia andefaso mailaka izahay, ny ekipa matihanina aorian'ny varotra dia hamaha ny olanao ara-potoana ary hanome anao vahaolana 100% mahafa-po.
Smart cap end cap ahafahana mampifantoka ny feed cable amin'ny lalana tiana (miverina, ankavia na ankavanana) ary miafina izany.
Fampifanarahana tariby / mpampifandray isan-karazany mifanaraka amin'ny saika fametrahana azy rehetra.
Teo aloha: RCL-2518 hazavana tariby LED eo alohan'izay
Manaraka: Fihenam-bidy mahazatra China 150W fanoherana ny hafanana avo lenta IP66 Tanteraka hazavana tondra-drano LED amin'ny tondra-drano
RCL-2518 hazavana tariby LED eo alohan'izay